I-10x14 Podcast: Sithetha nge-Apocalypse Apple | IPhone iindaba
Ziindaba zonyaka, leyo abaninzi babelinde ukuphuma emiqolombeni yabo babhengeze ukuba isiphelo seApple sele sifikile. Emva kweminyaka ibhengeza ukuwa kwengxilimbela, Kwakucacile ukuba ngenye imini iyakubetha isilingi kwaye kuzakufuneka iwele into, naloo mzuzu ufikile. Ukuncitshiswa kwengqikelelo yengeniso yenkampani kubangele ukuwa kwayo kwintengiso yesitokhwe kunye nezimvo zazo zonke iintlobo, ezo zibonisa ukuphela kweApple kuninzi.
Kwenzeke ntoni? Ngaba inzulu njengoko abanye befuna ukuyenza ibonakale? Ngokukodwa, ngaphandle kokuthobela ishedyuli ecwangcisiweyo, uJordi, uNacho kunye nam siye sahlangana ukuze sithethe ngesihloko, ewe, ngaphandle kokuzenzisa. Asinaso isitshixo sengxaki yeApple, asazi ukuba kufuneka benze ntoni ukusombulula, yile nto bayenzayo abanye.. Kodwa ukuba ufuna ukujoyina kwaye ubone uluvo lwethu ngalo mbandela, wamkelekile.
Njengoko besele siqalile kwisizini ephelileyo, kulo nyaka i-Actualidad iPhone podcast inokulandelwa ngqo ngejelo lethu le-YouTube kwaye ithathe inxaxheba kuyo ngengxoxo neqela lePodcast kunye nabanye ababukeli. Bhalisa kwisitishi sethu ukufumana izaziso zokuba ukuqala kokurekhodwa kwe-podcast, kunye naxa sidibanisa ezinye iividiyo esizipapasha kuyo. Ewe iya kuhlala ikho kwi-iTunes ukuze ukwazi ukuyimamela xa ufuna ukusebenzisa isicelo sakho osithandayo sePodcasts.. Sicebisa ukuba wena Rhuma kwi iTunes okanye ngaphakathi Spotify ukuze iziqendu zikhutshelwe ngokuzenzekelayo zakuba nje zifumaneka. Ngaba uyafuna ukuyiva apha? Kulungile nje ngezantsi ukuba umdlali uyayenza. Sikwanayo Uluhlu lokudlala kwiApple Music Ngomculo odlala kwipodcast (ewe, sinayo nayo Spotify...).
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 10 × 14: Sithetha ngeApocalypse Apple
UDaniel P. sitsho
Baneengxaki kwisandi. Jonga isandi kwi-podcast elandelayo njengoko ivakala iphantsi kakhulu. Kuya kufuneka unyuse ivolumu ukuya kwelona liphezulu ukuze uve into.
Phendula kuDaniel P.
Inotshi encinci kunye neTouchID kwiscreen, kunye nonxibelelwano lwe-USB-C lwe-iPhone 2019